मेस्सी र रोनाल्डोको भीडन्तः अन्ततः को अगाडि ? को हो सबैभन्दा धेरै कमाउने खेलाडी ?::Hamro Koshi Awaj / awaz
धरानः रोनाल्डो र मेस्सीका फ्यान छन् नै । यी दुई जनामध्ये को उत्कृष्ट भन्ने विवाद सायद फुटबल इतिहासकै ठूलो विवाद हो । एकै समयमा उदाएका कारणले गर्दा पनि होला सायद एउटाको छायामा अर्को पर्न सकेनन् ।
विश्व फुटबलमा एक दशकभन्दा लामो समयदेखि मेस्सी रोनाल्डोको जोडीले तहल्का मच्चाइरहेको छ । यद्यपि, उनीहरु फरक(फरक क्लब र देशका लागि खेल्छन् । सन् २००८ देखि २०२० सम्म १२ वर्षको बीचमा यी दुईको जोडीले ११ वटा ब्यालोन डिआर,१० वटा युरोपियन गोल्डेन बुट, ९ वटा च्याम्पियन्स लिग जितेका छन् ।
दुवैको उत्कृष्टतामाथि कसैले प्रश्न गर्न सक्दैनन् । अहिलेसम्म कसैले गरेका पनि छैनन् । अर्जेन्टिनी सुपरस्टार लियोनेल मेस्सी र पोर्चुगी सुपरस्टार क्रिष्टियानो रोनाल्डोबीच मैदानी भेट अप्रिल २९ सन २००८ मा पहिलोपटक र ६ मे २०१८ मा अन्तिम पटक भएको थियो । यसबीचमा उनीहरु कूल ३४ पटक आमनेसामने भएका छन् । सन २००८ मा मेस्सी र रोनाल्डोको भेट च्याम्पियन्स लिग सेमिफाइनल दोस्रो लेग खेलमा भयो । त्यतिबेला मेस्सी र रोनाल्डो दुवैले उत्कृष्ट आक्रमण गरेपनि गोल गर्न सकेनन् । खेल म्यान्चेष्टरले १–० ले जितेको थियो ।
दोस्रो भेट २७ मे २००९ मा च्याम्पियन्स लिगको फाइनल खेलमा भएको थियो । सो खेलमा मेस्सीको टिम बार्सिलोनाले रोनाल्डोको टिम म्यानचेष्टर युनाइटेडलाई २–० ले हराएर उपाधि जितेको थियो ।
१० अप्रिल २०१० मा भएको दोस्रो लालिगा भेटमा पनि रोनाल्डोको टिम मड्रिड बार्सिलोनासँग २–० हारेको थियो । सो खेलमा मेस्सीले ३३ औं मिनेटमा गोल गरेका थिए ।
त्यसपछि रोनाल्डो र मेस्सीको भेट २९ नोभेम्बर २०१० को लालिगा खेलमै भएको थियो । यस खेलमा पनि रोनाल्डोले मेस्सीसँग लज्जास्पद ५–० को हार व्यहोरेको थियो ।
राष्ट्रिय टिमका तर्फबाट मेस्सी र रोनाल्डोको पहिलो भेट ९ फेब्रुअरी २०१० मा मैत्रीपूर्ण खेलका लागि भएको थियो । सो खेलमा दुवैजनाले समान एक–एक गोल गर्दा खेल मेस्सी सम्मिलित अर्जेन्टिनाले २–१ ले जितेको थियो । १६ अप्रिल २०११ मा लालिगा खेलमा भएको थियो । खेलमा मेस्सी र रोनाल्डो दुवैले पेनाल्टिमा समान एक गोल गर्दा खेल १–१ कै बराबरीमा सकिएको थियो । सो खेलको ४ दिनपछि मेस्सी रोनाल्डोको भेट सोही मैदानमा कोपा डेल रेको खेलका लागि भएको थियो ।
पहिलो लेग २–० ले गुमाएका रोनाल्डो दोस्रो लेगमा मेस्सीको सामना गर्न ३ मे २०११ मा क्याम नोउ पुग्छन् । खेलमा दुवैले गोल गर्न सकेन र खेल १–१ को बराबरीमा सकिएको थियो ।
मेस्सी रोनाल्डोको १४औं भेट २०१२ को सुरुमै हुन पुग्यो । खेलमा रोनाल्डोले १ गोल गरेपनि बार्सिलोनासँग २–१ ले हारेको थियो ।
मेस्सी रोनाल्डोको १७ औं भेट स्पेनिस सुपर कप पहिलो सेमिफाइनल लेगको खेलमा क्याम्प नोउमा भएको थियो । खेलमा मेस्सी रोनाल्डो दुवैले समन १–१ गोल गर्दा बार्सिलोनाले ३–२ जितेको थियो । मेस्सी रोनाल्डोको २०१३ को पहिलो लडाइँ जनवरी ३० मा कोपा डेल रे क्वार्टरफाइनल पहिलो लेग खेलमा बेर्नाबेउमा भएको थियो । खेल १–१ को बराबरीमा सकिएको थियो। दोस्रो लेग खेल्न क्याम्प नोउ पुगेका रोनाल्डोले २ गोल गर्दै टिमलाई ३–१ को जित दिलाए । २ मार्चमा उनीहरुबीच २८ औँ भेट भएको थियो र यो खेलमा मेस्सीले १ गोल गरेपनि २–१ को हार टार्न सकेनन् ।
२३ मार्च २०१४ को लालिगा खेलमा मेस्सीले रियलको मैदान बेर्नाबेउ पुगेर सान्दार ह्याट्रिक हानेका थिए भने रोनाल्डोमात्रै १ गोलमा सीमित थिए । उक्त खेल बार्सिलोनाले ४–३ ले जितेको थियो। २५ अक्टोबरमा भएको लालिगा खेलमा रोनाल्डोको १ गोलको मद्दतले रियलले बार्सिलोना माथी ३–१ जित दर्ता गरेको थियो । १८ नोभेम्बर मेस्सी र रोनाल्डो दोस्रो पटक राष्ट्रिय टिमका लागि आमनेसामने भएका थिए। मैत्रीपूर्ण सो खेल रोनाल्डोले १–० ले जितेका थिए ।
२०१५ को पहिलो खेल २२ मार्चमा लालिगाको भएको थियो । उक्त खेलमा रोनाल्डोले १ गोल गरेपनि २–१ को हार टार्न सकेनन् । नोभेम्बर २१ मा भएको अर्को लालिगा खेलमा रियलको मैदान बेर्नाबेउमा बार्सिलोनाले ४–० को सानदार जित दर्ता गराएको थियो । त्यस्तै २ अप्रिल २०१६ मा बहेको लालिगा खेलमा रोनाल्डोको टोलिले २–१ ले जितेको थियो भने ३ डिसेम्बरमा भएको लालिगा खेल १–१ को बराबरीमा टुङ्गिएको थियो ।
२३ अप्रिल २०१७ को लालिगा खेल रियलको घरेलु मैदानमा भएको थियो ।खेलमा मेस्सीले २ गोल गर्दै ३–२ को जित दर्ता गराएका थिए । मेस्सी र रोनाल्डोको अन्तिम भेट ७ मे २०१८ मा लालिगा खेलमा भएको थियो । सो खेलमा दुवैले समान १–१ गोल गर्दा खेल २–२ को बराबरीमा टुङ्गिएको थियो । समग्रमा मेस्सी र रोनाल्डोले कुल ३४ पटक एक अर्का विरुद्ध खेलेका छन् । ३४ खेलमा मेस्सीले रोनाल्डोले भन्दा दोब्बर बढी १६ खेल जितेका छन् भने रोनाल्डोले ९ खेल जीतेका छन् र ९ खेल बराबरीमा सकिएका छन् । यी र यस्ता तथ्यलाइ हेर्ने हो भने रोनाल्डो र मेस्सीबीच भएका एक अर्काविरुद्धका खेलमा मेस्सी सधैं अगाडि रहेको तथ्य प्रष्ट छ ।